Amazon Chime ndiwo makwikwi akakomba kwazvo e Skype | IPhone nhau
Amazon inoenderera ichichinjisa zvigadzirwa zvayo mushe, uye ino nguva inouya muchimiro che software neChime, chishandiso chitsva chekugadzira vhidhiyo uye odhiyo misangano pakati pevashandisi vakasiyana izvo zvinobvumidza kureruka kuitwe mumhando iyi yemhando. Uye nderimwe rematambudziko eSkype inyaya yekuti nhaurirano dzinowanzoomeswa zviri nyore nekuda kwekugadzirisa uye matambudziko ekubatanidza. Chime anovimbisa zvakapesana, kuvhiringidzika-isina vhidhiyo kufona uye musangano musangano, zvirinani ndizvo zvavari kuvimbisa mumushandirapamwe wavo wekushambadzira uye kuti mushure mekutaurirana kwekutanga, zvinoita kunge zvechokwadi.
Ichi chishandiso, chingava sei neimwe nzira, iri multiplatform application, inozowirirana neMac, Windows, iOS uye Android. Imwe nzira yakanakisa, sezvo WhatsApp vhidhiyo yekufona uye Skype vhidhiyo musangano haina kupinda zvakadzama sezvavanofanira munzvimbo yehunyanzvi nharaunda. Amazon inovimbisa yemhando yepamusoro vhidhiyo nezvakanaka vhidhiyo nekuda kwechiitiko chako ne Amazon Web Services, kutora zvakapfava semureza, muchidimbu, ivo vanongoda kuti ishande uye iite nemazvo, pasina fanfare, vachivimbisa kusvika nekuishandisa.
Iko kwekutanga kunyorera kuchabvumidza misangano pakati pevanhu vaviri mahara zvachose, zvisinei, iyo Plus vhezheni inobvumidza chete € 2,50 pamwedzi iwe unogona, semuenzaniso, shandisa basa rekugovana mafoni uye kugadzira videoconferences nenhamba huru yevashandisi. Kushamisika kunouya nePro kunyoreswa, kwemazana gumi nemashanu euros pamwedzi, inotsigira mavhidhiyo musangano wevanhu vanosvika zana, vaine mabasa ekurekodha uye mamwe marongero mazhinji anotibvumidza kuti tishandure mhando yemusangano kusvika pakuneta.
Chichava kurova kwekupedzisira kune Skype? Chikumbiro icho kunyangwe chiri chinenge chakakosha, chinogadzira ruvengo rusingaenzaniswi nekuda kwekushomeka kwekugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Amazon Chime ndiwo makwikwi akakomba kwazvo eSkype